Diyopost.com :: सलमान खानको ‘द ब्याङ टुर’को टिकटमा ठगिनु भयो ? टिकट सहित अपराध महाशाखा टेकुमा जानुस् ! सलमान खानको ‘द ब्याङ टुर’को टिकटमा ठगिनु भयो ? टिकट सहित अपराध महाशाखा टेकुमा जानुस् ! - Diyopost.com
काठमाडौं । महानगरीय प्रहरी अपराध महासाखाले सलमान खानलाई नेपाल ल्याउने नाममा करोडौं ठगि गरेका पाइएपछि सर्वसाधरणसँग आह्वान गर्ने भएको छ । प्रहरीले सलमान खानलाई नेपाल ल्याउने भन्दै टिकट काटेका सर्वसाधरणलाई उजुरीको लागि समेत आह्वान गरेको छ ।
‘हामीले सर्वसाधरणलाई विज्ञप्ति नै निकालेर अह्वान गर्ने छौँ । यो विषय निकै जटिल छ । धेरै सर्वसाधरण ठगिनु भएको छ,’ महानगरीय प्रहरी अपराध अनुसन्धान महासाखाका प्रमुख एसएसपी धिरज प्रताप सिंहले भने,‘आम सर्वसाधरणले आफ्नो टिकट सहित प्रहरी कार्यालयमा आएर उजुरी गर्नुपर्छ ।’
ओडीसी इन्टरनेश्नलका प्रमुख सिमान्त गुरुङलाई शुक्रबार माहाशाखाले पक्राउ गरेको थियो ।
ओडिसी इन्टरनेश्नलले ‘द ब्याङ टुर’ टाइटलमा कार्यक्रम आयोजना हुने भन्दै करिब ५ हजार टिकट विक्री गरिएको थियो । जसमा नायिका सोनाक्षी सिन्हा, प्रभू देवा, मनिष पल लगायतका कलाकारहरु पनि सहभागी हुने बताइएको थियो ।
गत फागुन २६ गते भारतीय बलियुड कलााकर सलमान खानलाई नेपाल ल्याउने भनिएपनि विप्लव माओवादीको धम्कीका आउन सकेका थिएनन् । तर, गुरुङले फेरी जेठ १२ गते खान नेपाल आउने भन्दै टिकट विक्री गर्न थालेका थिए । उनले प्रति टिकट ३ हजारदेखि १० हजार सम्म उठाउँदै आएका थिए ।
अपराध महासाखाले टिकटमा ठगिएका हरेकलाई टिकटसहित उजुरी गर्न आह्वान गरेको छ ।